China M miorina amin'ny fantsom-bolo vita amin'ny fehezan-drano vita amin'ny vy M Miorina (Poste iray) ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy masoandro | Pro Fefy
Izy io dia karazana fefy vy tariby izay vita amin'ny tariby vy avo lenta voahodina ao anaty las aloha ary avy eo mampiasa milina miondrika mba hahatonga ny V miendrika ambony sy ambany. Farany, farano amin'ny hafanana atsobika ao anaty palitao zinc tokony ho 450g / m izany mba hampihenana ny harafesina sy harafesin'ny fampiasana. Izy io dia fefy matevina avo lenta sy maharitra ary ampiasaina amin'ny alàlan'ny sakana fiarovana ho an'ny toeram-pambolena masoandro, sehatry ny indostria.
PRO.Fence dia afaka manome azy namboarina amin'ny savaivon'ny tariby, ny elanelan'ny harato, ny haavon'ny fefy,
Miankina amin'ny filan'ny tetikasanao manokana izany. Izahay dia mamolavola fittings habe kely fa tsy paositra lehibe iray ary tsy manasaraka iray hampihena ny vidin'ny tetikasa ary raha miantoka ny fampiasana tsy tapaka. Safidinao tsara indrindra io raha mitady fefy avo lenta sy vidiny ambany ho an'ny tetikasanao. Ny mpanjifanay maro an'isa dia mampiasa azy io ho toy ny fefy fiarovana ny toby famokarana herinaratra, valan-javaboary indostrialy, toeram-piantsonana, arabe sns.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny herin'ny masoandro, toeram-pambolena amin'ny masoandro, fa azo ampiasaina amin'ny valan-javaboary, toeram-piantsonana, ary fitokanana amin'ny làlana.
Vita: notampohan-drano mafana naroboka / Herinaratra nandrendrika / vovoka mifono
Fikirakira ny tariby karbaona kalitao miaraka amin'ny tanjaka fihenjanana avo lenta, ary hamita azy amin'ny hafanana atsoboka ho an'ny zinc mifono 450g / m2, amboary amin'ny alàlan'ny fametahana SUS 304. Ireo dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanoherana ny harafesina. Ny PRO.Fence dia miantoka ny tsy hisian'ny rusting farafaharatsiny mandritra ny 6 taona.
Izy io dia misy tontonana mesh, lahatsoratra. Ny rafitra tsotra dia mety hanampy amin'ny fametrahana mora eo amin'ny tranokala. Ny elanelana misy eo anelanelan'ny lahatsoratra dia azo ahitsy amin'ny toerana rehetra azo atao na dia any an-tampon'ny tendrombohitra aza.
Item TSY: PRO-04 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: Fefy tariby nohamafisiny ho an'ny fambolena sy ny fampiharana indostrialy
Manaraka: PVC mifono vy tariby harato horonan-taratasy ho an'ny indostrialy sy ny fambolena fampiharana